छोरीलाई नै लाख सम्झिने संगीतकर्मीहरुको अनुभव - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको आफ्नै गौरवशाली इतिहास छ । संसारभरका महिलाहरूले यो दिवस मनाउन थालेको ११० वर्ष पूरा भएको छ । ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने नाराका साथ यो वर्ष १११ औं नारी दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ । नेपालको संविधानले शब्दमा समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा भने विभेद जारी नै देखिन्छ । तर पछिल्लो समय नारामा मात्र होइन व्यवाहारमा पनि ‘छोरी अब्बल छन्’ भन्ने सभ्य आमा बाबु पनि छन् । तीमध्ये छोरी मात्र भएकोमा गर्व गर्ने संगीतकर्मीसँगको कुराकानीमा सबिता पोखरेलले तयार पारेको रिपोर्टः
रामकृष्ण ढकाल, गायक
लोकप्रिय गायक रामकृष्ण ढकालकी एक मात्र छोरी छिन् –रानी ढकाल । अहिले रानी १४ वर्षकी भइन् । उनी ९ कक्षामा पढ्दैछिन् । गायक ढकाल विचारमा छोरा होस् या छोरी, सन्तान सुखका लागि एउटै काफी हुन्छ । मानिसहरू घरमा छोरीहरू हुँदाहुँदै पनि छोराको चाहना व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्, तर ढकाल भने छोरी नजन्मिंदै छोरी नै चाहन्थे । छोरीको नाम रानी भनेर ढकाल दम्पत्ती पहिले नै सोचेका थिए । नभन्दै भयो पनि त्यस्तै, छोरी नै जन्मिन् । तर गाउँसमाज, साथीभाइ र केहि अग्रजले छोराको महत्व बढी देखाउँथे, सुनाउँथे । रामकृष्ण भन्छन् बाबा राम र आमा निलमको पहिलो अक्षर जोडेर हामीले छोरीको नाम ‘रानी’ राखेका हौं । त्यतिबेला रामकृष्णको लाजिम्पाटमा घर थियो । घरको नाम पनि रानीमहल राखे । पुरानो पुस्ताबाट छोरा पाउन दबाब आएता पनि, पहिलो सन्तान छोरी हुनेबितिकै दोस्रो सन्तान नजन्माउने निश्चय ढकाल दम्पत्तीले गरे । उनको घरभित्र भने दबाब खासै भएन । आमा रहँदासम्म पनि नाती चाहिन्छ भन्ने सुन्नुपरेन । छोरीप्रति उनको उनको परिभाषा र सम्मान फराकिलो छ । उनी भन्छन् – छोरी सिर्जना हुन्, जननी हुन्, पृथ्वी हुन् अनि सहनशीलताकी देवी हुन् । आमालाई सम्मान गर्ने तर छोरी जन्मिंदा नाक खुम्च्याउने आखिर किन ? । तर सत्य त यो हो कि आमाबाबाको रहर आकांक्षामा रमाउन जान्ने सन्तान केवल छोरी नै हुन् । छोरीहरु संवेदनशील हुन्छन्, लजालु हुन्छन् । रानीको लजालु स्वभाव पनि आफूलाई अत्याधिक मन पर्ने गायक रामकृष्णले बताए । बाबाको पथमा हिंडेर केहि गीत गाइसकेकी रानीको यतिबेला साइन्स र टेक्नोलोजीमा अभिरुची बढ्दै गएको छ । छोरी जे बने पनि उनको पुरा साथ समर्थन रहनेछ । एउटै सन्तान हुँदा अभिभावकको सामथ्र्यले जुटाएको स्रोत ढुक्कले एक जनामाथि लगानी हुन पाउँछ, यो पनि एउटा सन्तान हुनुको फाइदा हो ।
बरिष्ठ गायिका कुन्ती मोक्तान र संगीतकार शीलाबहादुर मोक्तानका दुई छोरीहरु मात्र छन् । ३२ वर्षअघि कुन्तीले पहिलो सन्तानको रुपमा शीतललाई जन्म दिइन् । त्यसको साढे दुई वर्ष पछाडी शितलले बहिनी पाइन् शुवानी । अहिलेको समयमा त एउटा छोराको आश गर्ने समाज ३०–३२ वर्ष अगाडि त झन् छोरा नभई हुन्न भन्ने सोचले ग्रस्त थियो । तर मोक्तान दम्पतीलाई दुई छोरी नै काफी थिए । उनीहरुलाई छोरीको आमा बाबुु बन्नुमा गर्व थियो र छ । तर त्यो समयलाई सम्झिंदै गायिका कुन्ती मोक्तान भन्छिन् – नानीहरु हुर्कदै थिए । हाम्रो परिवार खुशी थियौं तर दुःख त हाम्रा साथीभाइलाई पो लाग्न थालेछ । प्रत्येक भेटमा उहाँहरुको एउटा अनिवार्य प्रश्न हुन्थ्यो अब छोरा पाउने होइन ? कि त सल्लाह दिंदै भन्नुहुन्थ्यो अंश र बंश धान्नका लागि पनि छोरा चाहिन्छ । छोरी भए फाल्ने छोरा भए राख्ने भन्ने सल्लाह दिंदै भन्थे पछि पछुताउनु पर्ला । यस्ता प्रश्न गर्नेहरुलाई मोक्तान दम्पत्ती छोरी पनि छोरा भन्दा कम हुँदैनन् भनेर जवाफ दिन्थे । तर टाउको त साथीभाइको अझ दुख्थ्यो र भु्रणको लिंग पहिचान गरेर सन्तान जन्माउने उपाय पनि सिकाउँथे । चिने जानेका साथीहरुले लिंग पहिचान गरेर नै छोरै छोरा जन्माएका थिए । पटक पटक उनीहरु छोराका आमाबुबा बनेकोमा रवाफ देखाउँथे । तर परिस्थिती ठीक उल्टो बनेको छ यतिबेला । समाजले चिन्ने सन्तान मात्र होइन आमाबुवाको मनोभावना पनि बुझिदिने छोरीका अभिभावक बन्न पाउँदा गर्व गर्न पाएका छन् । विवाह गरिसकेका छोरीहरुले पनि एक्लो महशुष गराएका छैनन् । आमाबालाई के कुराको अभाव छ भनेर आँखा पढ्ने क्षमता छोरीमा हुँदो रहेछ । तर आज लिंग परिक्षण गराएर छोराका अभिभावक बनेका तिनै साथीहरु यतिबेला पछुताएका छन् । कतिपयको त एउटै घरमा भान्सा अलग अलग भएको पनि देखेकी छु । तर हामी छोरीहरुबाट अभुत्पूर्व आनन्द पाइरहेका छौं । साढे तीन दशक लामो वैवाहिक जीवनमा आफूलाई कहिल्यै छोराको अभाव महसूस भएन । यसर्थ लिंग ठुलो कुरा होइन अनुशासन दिएर हुर्काउनुपर्छ छोरीमा अपार खुसी पाउँन सकिन्छ ।
सुगम पोखरेल, गायक
सुप्रसिद्ध गायक सुगम पोखरेल एउटी छोरी हुर्काइरहेका छन् –एन्जलिजा पोखरेल । एन्जलिजा अहिले १४ वर्षकी भइन् । सेन्ट म्यारिज स्कुलमा कक्षा ८ मा पढिरहेकी छोरी एन्जलिजा नै उनीहरुको संसार हो । खुसी हो । सबैथोक हो । सुगमलाई लाग्छ, ठूलो सौभाग्यले छोरी पाएको हो । उनीहरुलाई यही एउटी छोरी काफी छ । परिवारले पनि उनीहरुलाई छोरा वा अर्को सन्तानको लागि दबाब दिएको छैन । सुगम भन्छन् – शिक्षित परिवेश भएर हो कि वा हामीले भनेको टेर्दैन भनेर हो, परिवारभित्रबाट छोरा चाहिन्छ भनेर मलाई कसैले पनि दबाब दिएनन् । परिवारभित्र छोरीप्रतिको विभेद परिस्थितिको सामना गर्नु नपरे पनि कतिपय साथीभाइ र आफन्तहरुले भने ‘छोरा चाहि जन्माउनुपर्छ है’ भनेको बारम्बार सुन्नु प¥यो । कतिपयले त अझै पनि घुमाउरो रुपले दुईटा सन्तान त हुनैपर्छ भन्नुहुन्छ । यो सब हुनुको कारण छोरालाई जतिसुकै दुःख गरेर भए पनि बुढेसकालको सहारा सोचेर हुर्काएको बढाएको हुन्छ भने छोरीलाई अर्काको घर जाने जात भनेर सम्बोधन गरिन्छ । समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको घरमै पनि छोराछोरीबीच विभेद भएको पाइन्छ । छोरा जन्मँदा माया गर्ने र छोरी जन्मँदा नाक खुम्च्याउने अझै देखेका छौं । तर पुरातन सोचका व्यक्तिहरु नै पछि पछुताएको उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । मायाले मताएका छोराहरुले नै बुबाआमालाई एक्लो बनाएको पनि देखिन्छ भने छोरी जो अर्काकै घरमा गइसकेकी किन नहोस् उसले आमा बुबाको भावना बुझेकी हुन्छे । टाढै बसेर पनि एक्लो महसुस नगराउने क्षमता छोरीमा मात्र हुन्छ । यथार्थमा महिला पुरुष भन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा कम छैनन् । पुरुषप्रधान समाजको यथास्थितिवादी चिन्तन, सामन्ती सोचले उनीहरूलाई पुरुषभन्दा कमजोर र निरीह बनाइएको हो । यसका बिरुद्ध हामीले भाषण आदर्शका गफ मात्र गर्ने होइन घरघरबाट छोरी जन्माउँदा गर्व गर्न सक्नु पर्छ ।
सिता थापा, गायिका
गायिका सिता थापा एक्ली छोरीलाई भरपुर समय दिइरहेकी छिन् । संस्कार सिकाइरहेकी छिन् । उनको छोरीको नाम ‘सुप्रिना पुन’ हो । सुप्रिना अहिले १५ वर्षकी भइन् । एसइइको तयारी गरिरहेकी सुप्रिनाले अपार सन्तान सुख दिइरहेकी छिन् । सुप्रिना र सिता अहिले आमा छोरी मात्र होइन साथी साथी नै बनेका छन् । सिताको विचारमा पनि छोरा होस् या छोरी, सन्तान सुखका लागि एउटै काफी हुन्छ । अझ छोरीमा जस्तो आनन्द छोरामा हुँदैन । सिता भन्छिन् –मेरो छोरी मेरो साथी हो । अहिले मेरो जोश जाँगर हिम्मत सबथोक मेरी छोरी नै बन्न सकेकि छिन् । यो गुण छोरामा हुन्छ होला जस्तो लाग्दैन । छोरा जन्मिंदा जति राम्रो हुन्छ, छोरी जन्मँदा त्यो भन्दा कम हुँदैन । बरु अझ बढी सन्तोष मिल्छ । श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसेकी सितालाई छोरीले दिएको हिम्मतले नै आफू बाँचेको बताउँछिन् । छोरीको ठाउँमा छोरा भएको भए यति साथ पाउँदिन थिएँ होला भन्ने उनलाई लाग्छ । हरेक क्षणमा साथ दिने क्षमता र शक्ति छोरीमा मात्र हुन्छ । छोरीलाई संस्कार र अवसर दियो भने जे पनि गर्न सक्छन् जहाँ पनि पुग्न सक्छन् । अब त मानिसहरुको सोचमा छोरा होस् होइन हे भगवान एक छोरी चाहिं होस् है भन्ने हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । छोरा हुन् या छोरी, राम्रो शिक्षा र संस्कार दिनसके उनीहरू बाबुआमाको मात्र हैन समाज र देशकै भरोसा र भविष्य हुने उनी बताउँछिन् ।
स्वर, प्रस्तुति र रुपको समेत प्रशंसा बटुल्दै आएकी लोकप्रिय गायिका मन्जु पौडेल पनि एक मात्र छोरीकी आमा हुन् । उनको छोरीको नाम स्नेहा हो । स्नेहा निकै सुन्दर छिन् उनी अहिले २१ वर्षकी भइन् । झट्ट हेर्दा आमा छोरीलाई दिदी बहिनी जस्तो देखिन्छ । अहिले छोरी स्नेहा मञ्जुकी दुःखसुखकी साथी पनि हुन्् । आशा र उमंगको पुञ्ज हुन् । छोरी स्नेहाप्रति मन्जुको अपार भरोसा र गर्व छ । सांस्कृतिक कार्यक्रम होस् या पारिवारीक जमघटमा छोरी स्नेहाको प्रंशसा हुने गरेको मन्जुले सुनाइन् । स्नेहा अस्कर इन्टरनेशनल कलेजबाट अभिनय र निर्देशन विषयमा ब्याचलर गरिसकेकी छिन् । आमा मन्जु जस्तै स्नेहा पनि कला क्षेत्रमै आवद्ध छिन् । उनले अभिनय गरेका केहि म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भइसकेका छन् । उनको अभिनयलाई दर्शक श्रोताले अत्याधिक मन पराइदिएका छन् । यसका अलावा उनको बिजनेसमा पनि रुची छ । स्लोथ वेयर नामको फेसन सम्बन्धी अनलाइन व्यापार पनि गरिरहेकी छिन् । स्नेहा क्रियटिभ माइण्डकी छिन् । मन्जु भन्छिन् – भाकल गरेर जन्माएका र मरिहत्ते गरेर हुर्काएका छोराले पनि आमाबाबुलाई सुख नै दिन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । यसर्थ यो युगमा पनि छोराको चाहना गर्नु सरासर पाप हो । जे हुन्छ इश्वरको बरदान सम्झनु पर्छ । मलाई त लाग्छ सर्वेक्षण नै गर्ने हो भने पनि छोराका आमाबुवा भन्दा छोरीका आमाबुवा बढी खुसी छन् । सुखी छन् र सन्तानप्रति गौरव महशुष गरेका छन् ।
वर्तमान सांगीतिक धरातलमा अधिक फ्यान फलोअर्स कमाउन सफल गायक तथा कलाकार प्रकाश सपुतकी पनि एक छोरी छिन् – प्रबृष्टि । नर्सरीमा पढीरहेकी प्रबृष्टि ४ वर्ष पुगीन् । छोरीप्रति प्रकाशकोे सम्मान उचो रहेको उनका अन्तर्वाता र विभिन्न भिडियो सामाग्री मार्फत पनि बुझ्न सक्छौं । वास्तवमै हामीसँगको कुराकानीको क्रममा पनि उनले छोरीप्रति अपार सम्मान र अगाध प्रेम भएको छर्लङ्ग पारे । तर, यति धेरै महिला सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता राख्ने प्रकाशले समेत छोराको अभिलासा गर्ने व्यक्तीहरुसँग संगत गर्नु परेको छ । प्रकाश सुनाउँछन् –मेरो सोच विचार बुझेर होला डाइरेक्टली भन्न त सक्नु हुन्न । इन्डाइरेक्टली भने छोराको अभिलासा राख्न सुझाव आउँछन् । मरिसकेपछि पनि छोरा नै चाहिन्छ भन्ने आशयका घुमाउरा कुराहरु सुन्छु । म बुझ्छु उहाँहरुको घुमाउरो सुझाव । तर मेरो परिवार भित्र भने छोराछोरी बीचको विभेद देख्नु परेन, कारण हामी ४ दाजुभाइ मात्र छौं । बाबा ममीलाई नै छोरीको रहर थियो रे । छोरीको रहर नातिनीले पुरा गरिदिएर पनि होला परिवार भित्रबाट अहिलेसम्म छोराकोलागि दबाब आएको छैन । छोरी भएकोमा म जति खुशी छु त्यति नै परिवार खुशी भएको आभाष मिलेको छ । प्रकाश छोरीलाई सृष्टीको सुन्दर उपहार मान्छन् भने आफ्नी छोरीलाई लक ठान्छन् । जब छोरी जन्मिन् तबबाट उनको लोकप्रियता अझ बढेको उनको अनुभव छ । छोरी प्रविष्टिको एक एक मुस्कान र गतिविधिले उनलाई उर्जा दिने गरेको बताए ।
प्रिती आले, गायिका
चर्चित गायिका प्रिति आले एउटै छोरीलाई लाख ठान्छिन् । उनकी एकमात्र सन्तान छिन्– गुराँस केसी । १० वर्षकी गुराँस ह्वाइट माउन्टेन स्कुलमा कक्षा ४ मा पढिरहेकी छिन् । प्रिती भन्छिन् – गुराँस सानै भएपनि अहिले नै साथी भएकी छिन् । सायद छोरा भएको भए यस्तो सम्बन्ध हुँदैन थियो होला । तर साथीभाइ र आफन्तहरुले दिने सल्लाह ‘एउटी छोरी भइहालिन् अब अर्को सन्तान’ भन्ने शब्दावली सुन्दा सुन्दा वाक्कै लागेको प्रिती सुनाउँछिन् । प्रितीले भनिन् –मलाई नदुखेको टाउको किन अरुलाई दुख्छ होला अचम्म लाग्छ । आजको युगमा सन्तान मात्र थुपारेर उनीहरुको भविष्यमाथी खेलवाड गर्ने अधिकार कुनै आमाबाबालाई छैन । धेरै सन्तान जन्माएर कष्ट दिनु भन्दा एउटै सन्तानलाई सुविधा दिएर हुर्काउनु राम्रो हो । उनी छोरीको व्यवाहारप्रति निकै खुशी छिन् तर छोरीप्रति गरिने व्यवहार र सोचप्रति दुःख लागेको सुनाउँछिन् । प्रसंगमा महिला हिंसालाई जोड्दै भन्छिन् हाम्रो पुस्ता त हाम्रो भइहाल्यो छोरीहरुको पुस्ताले हिंसा देख्नु नपरोस्, सुन्नु नपरोस् लाग्छ तर आज पनि छोरीलाई कुदृष्टिबाट कसरी बचाउने भनेर सोच्नु परेको छ । घरमा छोरीलाई एक्लै छोड्नु हुन्न है, जमाना ठीक छैन भन्दै सामाजिक परिवेशको यथार्थबोध कहिलेसम्म गराउनु ? बलात्कार हत्याका समाचार के सदैव सुन्नु पर्ने हो ? छोरी जन्माएकोमा र आफू आमा भएकोमा निकै गर्व गर्छु तर यस्ता कुराले भने निकै सोचमग्न बनाउँछ । छोरी मोहका बारेमा भने यदि आर्थिक स्तर र स्वास्थ्यले साथ दिएमा २ सन्तानसम्म राम्रो नै हो । त्यो छोरा होस् या छोरी । तर आमा बाबाको भावना बुझ्ने चाहिं छोरी नै हुन् । त्यो मेरो परिवारमा पनि लागु हुन्छ । ४ दाजुभाइ हुँदाहुँदै पनि मेरी आमा आज मसँगै हुनुहुन्छ । आमा मसँग रहनुको कारण भौतिक सुविधाका लागि नभई आत्मियता र भावनात्मक सुखका लागि नै हो ।
गायक सुमित खड्काका पनि दुई छोरीहरु छन् – नेन्सी र मान्सी । २० वर्षअघि नै दुई छोरीका अभिभावक बनिसकेका सुमित भन्छन्– दुई छोरी भएपछि छोेराको आवश्यकताबोध गरी हामी दुईबीच (श्रीमान –श्रीमती) कहिल्यै कुनै कुरै भएन । हामीले छोरीलाई हुर्काउने क्रममा अध्ययन, अनुशासन र संस्कारलाई प्राथमिकतामा राख्यौं । तर आफन्त र समाजले ‘दुईटी छोरी भइहाले, अब छोराको पालो भन्नु हुन्थ्यो । सबै मान्यजनले भेटघाटका क्रममा होस् या टिकाटालोमा अब छोरै जन्मियोस् भनेर आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो । त्यस्तोबेला मनमा नरमाइलो लाग्थ्यो । यति राम्रा र संस्कारी छोरी छन् तर पनि केका लागि छोरा चाहन्छ होला समाजले भन्ने प्रश्नहरु मनभरी आउँथे । यतिबेला सुमितका छोरीहरु ठुला भइसके । ठुली छोरी नेन्सी २१ वर्षकी भइन् भने कान्छी छोरी मान्सी २० वर्षकी भइन् । उनले छोरीहरुलाई राम्रो शिक्षा दिएका छन् । नेन्सीले मास कम्युनिकेसनमा डिग्री गरेकी छिन् भने मान्सी बिबिएकी एसिइ कलेज टपर हुन् । उनीहरु हिजोसम्म सुमित खड्काका छोरी भनेर चिनिंदै आएका थिए । तर यतिबेला कतिपय ठाउँमा सुमितलाई गायक सँगसँगै नेन्सी र मान्सीका बाबा भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ । त्यतिबेला आफू संसारकै भाग्यमानी बाबा बनेको महशुष हुन्छ । मेरो एउटै बुझाई छ छोरी होस् या छोरा आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा, अनुसाशन र संस्कार दिनुहोस्, कहिल्यै दुःख पाउनुहुने छैन । संसारकै भाग्यमानी अभिभावक भएको अनुभूति हुनेछ ।
चर्चित संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठ पनि छोरीलाई लाख ठान्ने संगीतकर्मीहरुको पंक्तिमा छन् । सन्तोषकी छोरीको नाम हो सफलता श्रेष्ठ । पाँच कक्षामा अध्ययन गरिरहेकी सफलता अहिले १० वर्षकी भइन् । संगीतकार श्रेष्ठ छोरी सफलताप्रति निकै गर्व गर्छन् । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि छोराकै चाहनामा पिरोलिएका व्यक्तिहरु अझै देख्नु परेको सुनाउँदै सन्तोष भन्छन् –अंश र बंश धान्नका लागि छोरो नै चाहिन्छ भन्ने समाजमा छोरीप्रति धेरैलाई विश्वास नै छैन । त्यसैले छोराछोरी वा लैङ्गिक भिन्नताका कुराहरू जोडिएको सुन्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा हुनुहुँदैन । समाज निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यता जस्तै बनेको सोचका कारण यस्ता चेतनाबिहीन कुराहरू बेलाबेलामा सुन्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुराले अबको समयमा खासै फरक पर्दैन । पारिवारिक पद्धति पनि त्यही समाजको चित्रणमा आधारित हुनेभएकाले कुल परम्परा वा अंश र बंश धान्न नाति वा छोरा चाहिन्छ भन्ने आवाजलाई असामान्य ठान्दैन । आफूलाई प्राप्त भएको सन्तान छोरीप्रति कुनै दुखेसो छैन । छोरीप्रति धेरै माया र विश्वास छ । सन्तुष्टि पनि छ । लैङ्गिक हिसाबले छोराछोरी भनेर तुलना गर्ने पद्धति नै गलत छ । मैले गरेको छैन र गर्नु हुँदैन । सफलतालाई सङ्गीतप्रति अत्यन्तै आकर्षण छ । भर्खरै एउटा गीत रेकर्डिङ भएको छ । भविष्यमा उनी जहाँ जाउन् जे गरुन् आत्मसन्तुष्टी मिलोस् । सफल बनुन् असल बनुन् ।
कला लम्साल, गायिका
गायिका कला लम्सालको एक मात्र सन्तान छिन् – अग्री रिजाल । उनी ६ वर्षकी भइन् । सामाखुसी स्थित रेकड स्कुलमा कक्षा १ मा पढ्छिन् । गायिका कला दम्पत्तीलाई एउटी छोरी नै काफी छ । गायिका कला भन्छिन्– ‘छोरा होस् वा छोरी, एउटा भए पुग्छ । हामीलाई अब छोराको अपेक्षा छैन ।’ आफूले एक सन्तान इश्वरको बरदान भनिरहँदा आफन्त र साथीभाइ भने मान्नुहुन्न । ‘अब एउटा छोरा त चाहिन्छ’ भन्नुहुन्छ । छोरा होस् या छोरी अर्को सन्तान चाहिन्छ भनेर घरमा पनि दबाब सुन्नु परेको छ । कतिपयले त लिंग पहिचान गरेर छोरा नै पाउने भन्ने सल्लाह दिनुहुन्छ । टिका लाउँदा पाउने पहिलो आर्शीवाद नै अब छोरा होस् भन्ने हुन्छ । तर कलालाई छोरा होस् वा छोरी समान लाग्छ । वंश चलाउनका लागि छोरा नै चाहिन्छ भन्ने उनलाई लाग्दैन । छोरी पनि आफ्नै रगत हो । आफ्नै वंश हो । छोराका लागि हामी जे जति गर्छाैं, छोरीलाई पनि त्यती नै गनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यो विचार आउनुमा कलाको आफ्नै भोगाइ छ । उनी सुनाउँछिन् – आफू पनि छोरी छोरी भएको परिवारमा जन्मिएँ । आफन्त र साथीभाइको हेर्दा छोरा भएको परिवारले भन्दा छोरी भएको परिवारले आमा बाबालाई बढी बुझेका हुन्छन् । विवाह गरेर घर टाढा भए पनि छोरीले गर्ने माया थपिने रहेछ यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव पनि हो । छोरीले विहे गरेपछि घरको आमा बाबा र जन्मदिने आमाबाबा दुबै सम्हाल्न सक्छिन् । अहिले बाबा हुनुहुन्न । आमा हुनुहुन्छ । सायद आमा हामीबाट खुशी हुनुहोला भन्ने विश्वास छ । मृत्युपछि पिण्ड दिने र वंश धान्ने छोरा नै हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ, त्यो केवल भ्रम हो । समाजलाई अध्ययन गर्नेहो भने आखिरमा साथ दिने भनेको छोरीहरु नै रहेछन् ।
अन्जु गौतम, गायिका
गायिका अन्जु गौतमकी एकमात्र छोरी छिन् । जसको नाम हो ज्योती खड्का । १६ वर्षकी ज्योती अहिले कक्षा ११ मा पढ्दैछिन् । छोरी जन्मिएको केहि वर्ष पछि परिवारले छोराको आश गरेको अन्जु बताउँछिन् । सासुआमाले सन्तान मासिने भनेर चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो र बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो –‘एउटासम्म विचार गर ।’ गाउँले र आफन्तले पनि छोराका लागि दिएको सुझाव त कति छन् कति । यस्ता कुराले अन्जुको मन खिन्न त हुन्थ्यो नै तर अन्जु र उनका श्रीमानले सन्तानको अभिभावक हुन पाएकोमा नै भाग्यमानी महशुष गरे । कसैका कुरा सुनेनन् । अर्को सन्तानको तयारी नगर्ने निधो गरे । छोरीको महत्व नबुझदा मानिसहरू छोरा मोहमा पर्ने गरेको अन्जुको बुझाई छ । अन्जु दम्पत्तीलाई आफ्नो सम्पत्तिको हकदारको लागि छोरा चाहिएको छैन । वंश धान्ने छोरा चाहिएको छैन । किन भने यी सबका लागि छोरी पनि योग्य हुन्छिन् । अन्जु भन्छिन्– वास्तवमा सच्चा अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई दिने भनेको शिक्षा र संस्कार हो । त्यति भएपछि उनीहरु आफै गरी खान सक्षम हुन्छन् ।’ तर, पुरुषप्रधान समाजमा छोरालाई सम्पतिको हकदार बनाउने प्रचलन रहेकोमा उनलाई खिन्न लाग्छ । जबकि त्यही छोरा हो, जसले बुवाआमाप्रतिको उत्तरदायित्व बुझ्दैन । केवल सम्पतिको लागि बुवाआमालाई आश्रय दिन्छन् । हरहमेशा बुवाआमालाई प्रेम गर्ने भनेको छोरी नै हुन् । छोरीभन्दा ठूलो खुसी हाम्रो अरु केही छैन । हिजो नातीको आश गर्ने आमा पनि यतिबेला नातीनीप्रति खुशी हुनुहुन्छ । छोरी ज्ञानी र अनुसासीत र संस्कारी भएकोमा परिवार खुशी छौं सन्तुष्ट छौं । छोराले एउटै घरलाई पनि पुरा खुशी दिन गा¥हो छ । तर छोरीसँग २ परिवारलाई खुशी दिने क्षमता हुन्छ ।
सरोज कोइराला, गायक÷संगीतकार÷सञ्चारकर्मी
लोकप्रिय सञ्चारकर्मी एवं गायक संगीतकार सरोज कोइराला पनि एक छोरी बुबा हुन् । उनको ८ वर्षकी छोरी ‘आर्या कोइराला’ छिन् । उनी यतिबेला कक्षा २ मा अध्ययनरत छिन् । गायक कोइराला पनि छोरीलाई नै महत्वपूर्ण ठान्ने गर्छन् । परिवारबाट छोरा चाहिन्छ भन्ने दबाब आएन तर साथीभाइबाट ‘अब एउटा छोरा चाहिन्छ’ भन्ने कुरा सुन्नु प¥यो । यसो त हाम्रो परिवारमा चार दाजुभाइ मध्ये तीन जनाको एक–एक जना छोरी छन् । सबैजना छोरीप्रति गर्व गर्छौं । हाम्रो परिवार छोरी मैत्री परिवार हो । छोरी व्यवहारिक हुन्छन्, संवेदनशील हुन्छन् यो मेरो पनि भोगाइ हो र समाजमा यो देखिन्छ पनि । यतिखेर छोरीको कलाप्रति रुचि बढ्दै गएको छ । मेरो बाटोलाई पछ्याएको देख्दा थप खुशी मिलेको छ । सायद मानिसहरुको सोचाइमा परिवर्तन आएकोले होला आजकल छोरा या अर्को सन्तानको सल्लाह त्यति सुन्नु परेको छैन ।
यस्तै छोरीमा सुखी र खुशी महशुष गर्ने आमा बाबुहरुमा अन्य थुप्रै संगीकर्मीहरु पनि छन् । गायक शिव परियारकी पनि एउटै छोरी छिन् । जसको नाम हो सुहाना परियार ।
गायिका पूर्णकला बिसी पनि एक छोरी हुर्काइरहेकी हुन् । छोरीको नाम रोनिया हो, उनी यूकेजीमा पढ्दैछिन् । उनको पनि साथीभाइले अर्को सन्तानको सल्लाह दिइरहेको बताउँछिन् । छोरा होस् या छोरी दुई सन्तान हुनै पर्छ भन्ने दबाब परिवारबाट निकै सुन्नु परेको छ ।
गायिका अर्पणा श्रेष्ठ पनि एक छोरीकी आमा हुन् । उनकी छोरी क्रिस्टिनाले यतिबेला उनकै बाटो पछ्याउँदै आएकी छन् । क्रिस्टिना यतिबेला १५ वर्षकी भइसकेकी छन् ।
चर्चित गायिका राधिका हमाल र संगीतकार कृष्ण पुनले पनि एउटी छोरी हुर्काइरहेका छन् । सकिरा मगर उनीहरुको एकमात्र सन्तान हुन् ।
अन्जु पन्तको पनि एक मात्र छोरी छिन् परितोषिका पन्त । उनी हरहमेशा आफ्नो बेस्टफ्रेण्ड नै छोरी भएको बताउँछिन् । कयौं पटक जटिल परिस्थितबाट छोरीले निकालेको अनुभव छ अन्जुसँग । त्यस्तै गायक मनोजराज पनि छोरीका बाबा हुन् । अन्जुपन्त सँग डिभोर्स गरेका मनोजको गायिका कृष्णा शिवाकोटी तर्फ पनि एक छोरी छिन् । अन्जु तर्फकी छोरी परितोषिका अन्जुसँगै रहँदै आएकी छिन् ।
गायक बद्री पंगेनी पनि छोरीमा विश्वास गर्ने संगीतकर्मीमा पर्छन् । उनकी एकमात्र सन्तानको नाम बिहानी पंगेनी हुन् । अहिले १२ कक्षामा पढिरहेकी बिहानीले छोरा या छोरी भन्दा पनि सन्तानको भूमिका निर्वाह गरेको बद्रीको अनुभव छ ।